देश : प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केक ! सामाजिक सञ्जालभरि चर्को आलोचना « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ, १२ फागुन । प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनमा देशको नक्सा आकारको केक । हिमाल, पहाड, तराई । प्रधानमन्त्रीको हातमा छ चक्कु । वरिपरि रमितेहरु ताली बजाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मग्नमस्त रुपमा केक काट्दै बाँडिरहेका छन् । झट्ट यो दृश्य देख्दा देशप्रेमी मनहरु झस्किनु स्वाभाविकै हो ।
‘बिलो लिएझैं शरमा उनेर
यो राज्य बाँड्ने चिज हैन हेर’
यसरी नक्सामा प्रतीकात्मक ढंगले काटेर बाँडिरहेको दृश्यले माथि उल्लिखित राष्ट्रकवि माधव घिमेरेकाे कवितांश (राष्ट्रनिर्माता खण्डकाव्य) सम्झनामा आयो । संयोगवश शतायु व्यक्तित्व राष्ट्रकवि घिमिरेकै हातबाट (र, अर्का शतायु व्यक्तित्व सत्यमोहन जोशीको हातबाट) प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मदिनकै छेको पारेर (शनिबार) ‘भिजन टु एक्सन’ किताबको विमोचन गराए । भाेलिपल्टै केकमा देश बनाएर काटिरहेका प्रधानमन्त्री देख्दा ती राष्ट्रकवि घिमिरे र संस्कृतिविद् जाेशीले के साेचे हाेलान् !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६९ औँ जन्मदिन आफ्नो तेह्रथुमस्थित पुर्ख्याैली घरमा मनाउँदाको यो तामझाम र लहडले उनलाई चर्को विवादमा पारेको छ । आइतबार (फागुन ११ गते) नेपालको नक्सा आकारको १५ किलोको केक काटेर जन्मदिन मनाए, जसमा संघीय सरकारका तीनजना मन्त्री, प्रदेश- १ का मुख्यमन्त्री र अन्य प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, कर्मचारी र नातेदार लगायतकाे जमघट थियाे । स्कुले बालबालिका समेत प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा प्रयाेग गरियाे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका- ४ इवास्थित जन्मघरमा आइतबार आफ्नाे ६९ औँ जन्मोत्सव मनाउने क्रममा केक काट्दै
प्रधानमन्त्रीले काटेकाे लिम्पियाधुरासहितकाे देशकाे मानचित्र अंकित उक्त केक काठमाडौँमै तयार पारेर हेलिकप्टर चार्टर गरी तेह्रथुमको आठराईस्थित प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मघरमा पुर्याइएको थियो । बालुवाटारकै बिग बेक बेकरीमा तयार पारिएको केक ओसार्न यति एयरकाे हेलिकप्टर चार्टर गरिएकाे थियाे । याे विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालभरि चर्को आलोचना भयो । केक बोकेर यती समूहका अध्यक्ष आफ्नै हेलिकप्टरमार्फत प्रधानमन्त्रीको जन्मघरमा पुगेका थिए । स्मरणीय छ, यति समूहसँग सरकार र विशेषगरी सत्तारुढ नेकपाको साठगाँठ गहिरो रहेको विविध घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
परिवारसहित तेह्रथुम उड्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा पनि केक काटेर निकटकालाई खुवाएका थिए । त्यसपछि उनको टोली चारवटा हेलिकोप्टर चार्टर गरी आठराईस्थित घरमा पुगे । त्यहाँ करिब ६ हजारजतिलाई भोज खुवाएको बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपाले नेता-कार्यकर्ताका लागि केही समयअघि आचारसंहिता जारी गरेकाे थियाे । साे आचारसंहितालाइ नै चुनाैती दिने गरी साेही पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले भड्किलाे उत्सवका रूपमा जन्मदिन मनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तामझामको राजकीय शैलीमा जन्मदिन मनाएको, जन्मदिनमा स्थानीय सरकारले बिदा दिएको लगायत विषयमा जति आलोचना भयो, त्योभन्दा बढी नेपालको नक्साअंकित केक काटेर बाँडेको घटनाले सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म आलोचना भइरहेको छ । यो कस्तो कुबुद्धि र कस्ता लठैत सल्काहकार भन्ने आशयमा धेरैले व्यंग्य र आलोचना गरेका छन् भने सो केक काटेको तस्वीर भाइरल भइरहेको छ ।
यतिखेर हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको जन्मदिनको केकजस्तो होइन मेरो देश… भन्ने गीत र कुनैवेला देशलाई संघीयतामा लैजानुहुँदैन भनी स्वयं ओलीकै मुलुक कसैको बर्थडे केकजस्तो हैन, च्वाट्ट काट्यो, बाँड्यो भन्ने भनाइलाई सम्झँदै ओलीप्रति नै व्यंग्य गरिँदैछ ।
कतिपयले केकमा मुलुकको मानचित्र राख्नु प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकारहरुको अपरिपक्वता, विवेकहीनता र संवेदनहीनता भनी आलोचना गरेका छन् । यसरी मुलुकको मानचित्र भाग लगाएर खाइरहेको दृश्यले राष्ट्रवादी कहलिएका प्रधानमन्त्रीको संवेदनहीनता उजागार गरेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
जन्मदिन वा कुनै उत्सवका रुपमा केक काट्ने प्रचलन नेपाली मौलिक शैली हुँदै होइन । तर पनि आजकल समय, समाज र बाह्य संस्कृति या भनौँ ग्लोबलाइजेसनको प्रभावस्वरुप नेपालमा पनि जन्मदिनमा केक काट्नु अब संस्कार नै बनिसकेको छ । जन्मदिनभन्दा पर पुगेर केक-संस्कारले वैवाहिक वर्षगाँठ, कुनै उत्सव, खुशियाली आदिमा समेत स्थान पाइरहेको छ ।
तर यसरी केकमा देशको नक्सा, झण्डा वा राष्ट्रप्रमुखककै तस्वीर राखेर काटेकाे घटना भने याे नै पहिलाे हाेइन । अन्य मुलुकमा पनि यसरी नक्सा, झण्डा, विश्वकै मानचित्र समेत राखेर केक तयार पार्ने गरिन्छ । खोज्दै जाँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिनमा पनि भारतको नक्सा प्रिन्ट गरेर केक बनाइएको गुगलमा भेटिएको छ ।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाकाे ५० औँ जन्मदिनका अवसरमा अमेरिकाकाे झण्डामाथि स्वयं ओबामाकाे तस्वीर राखेर केक तयार गरिएकाे भेटिएकाे छ । उक्त केक भिक्टोरिया डेमोक्याटिक पार्टीले आफ्ना राष्ट्रपति ओबामाकाे जन्मदिनमा सन् २०११ मा तयार पारेकाे थियाे ।
भनिन्छ– केकमा आफूलाई सबैभन्दा मन पर्ने र प्यारो लाग्ने चीज–वस्तुकै प्रतीक बनाएर काट्ने गरिन्छ । तर नेपाली समाजमा भने राष्ट्रको नक्सायुक्त केक बनाएर बाँडिखाएकाे दृश्य अलि अपाच्य नै देखियो । त्यसैको तीव्र प्रतिक्रिया हो– सामाजिक सञ्जालभरि देखिएको आक्रोश, खेद, व्यंग्यमय आलोचना ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षौपछि आफू जन्मेको माटो टेक्नु, त्यहाँ जन्मोत्सव मनाउनु मातृभूमि र माटोप्रतिको माया हो । यो राम्रो पक्ष हो । तर उनले केककै संस्कृति अवलम्बन नगरी नेपाली मौलिकता झल्किने शैली अपनाएर जन्मदिन मनाउन सक्थे । राजसी ठाँटबाठमुक्त जनप्रिय तवरले उत्सव मनाउन सक्थे । जसले उनको लोकप्रियता अझ चुलिने थियो । तर यस घटना (यतिवेलासम्मका काण्ड) बाट उनले जे-जति आलोचना खेपे, त्यसबाट उनी नेतृत्वको सरकारको आयुरेखा अब लामो नहोला भन्न सकिने अवस्था देखिँदैछ । भलै उनको जीवनकाे आयुरेखा लामो नै बनोस्, यसमा कसैको कुमति रहन्न।
ठ्याक्कै ०७२ को विनाशकारी भूकम्पअघि नयाँ वर्षको अवसरमा ओली धरहरा चढेको प्रसंग सम्झना हुँदैछ यतिखेर । २०७१ को चैत्र ३० गते बेलुकातिर तत्कालीन संविधान सभाध्यक्षले बोलाएको बैठक छोडेर धरहरा चढ्न निस्केका थिए उनी । उनले धरहरा चढेर आफ्नो राजनीतिक उचाइको संकल्प गरे र देशले नयाँ संविधान पाउने कामना समेत गरे ।
नभन्दै घटनाक्रमले एकपछि अर्को मोड लिँदै गयो । देशमा संविधान पनि बन्यो । ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेर नायक नै बने । उनको उचाइ र लोकप्रियता जनतामाझ बढ्यो । तर दुर्भाग्यवश धरहरा ढल्यो । उनी चढेको दुई साता नबित्दै ०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पमा धरहरा नामेट भयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । र, सँगै भारतीय नाकाबन्दीको कहर मुलुकले झेल्यो ।
यसपालिको जन्मदिनमा जेजति राजसी तामझाम गरिए, त्यसले अब ओलीको अलिकति बँचेकाे लोकप्रियता पनि झन घटाइदिएको छ । नेपालकै नक्साको केक काटिरहेको दृश्य पचाउन धेरैले सकेनन् । के यस घटनाले देशमा कुनै अपृय घटना हुने संकेत राख्छ ? होला/नहोला, तर ओलीको ओरालो गतिलाई यस घटनाले भने ह्वात्तै पिँधमा पुर्याइदिएको छ । मानौँ उनले आफ्नै सरकारको आयु काटिरहेका छन् ।
योसँगै चुनाव हारेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर सोमार्फत प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्ने प्रसंगले झन सरकारमाथि आलोचनाको तीर रोपिएको छ । प्रत्यक्षमा जनतामाझ चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने कुरा पाच्य हुनै सक्दैन । केक-काण्डअघि नै ओली सरकारले यस प्रसंगमा जनस्तरबाटै आलोचना खेपिसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले दरिलो काँध दिएर बोकिरहेका आफ्ना प्रिय पात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन काण्डले ल्याएको हलचल सेलाएकै छैन । जुन घटनाले भ्रष्टाचारको संरक्षण स्वयं प्रधानमन्त्री र नेकपाबाटै भइरहेको भनी आलोचनाको ग्राफ बढाइदियो । त्यसअघि राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता पारित गर्न ठाडो अडान राखेका ओली पार्टीभित्रैबाट एक्लिएपछि कार्यदल गठन गर्न सहमत भएका थिए, जुन कार्यदलले सो सम्झौतालाई राष्ट्रहित विपरीत रहेको र यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । उता, पूर्वराजाका सम्पत्तिमा यति होल्डिंसको रजाइ र अन्य ठूलठूला सेटिङमा उसकै हात माथि पार्ने सरकारको नियत के हो, यसबारे पनि जनता अनविज्ञ छैनन् ।
एकपटक ओलीका वर्तमान सहकर्मी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत ओलीले सरकारलाई ‘अलक्षिना’ भनेका थिए । अहिले देशलाई केक बनाएर बाँड्दा उनले यो लक्षिन गरे कि अलक्षिन ? सोधिरहेछ जनताको मनले । यी यावत घटनाक्रम, हर्कत, लहडबाजी, झूटको खेती र अपरिपक्वताले प्रधानमन्त्री ओलीको ओरालो यात्राको गति बढाइदिएको छ । अब त ओलीको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाटै उठ्न थालेका छन् ।
सल्लाहकारको साँघुरो घेरा
बलुवाटारमा सल्लाहकारको साँघुरो घेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका एकपछि अर्को विवास्दास्पद गतिविधिले उनको छवि मैलिँदै गएको छ । तर प्रधानमन्त्री स्वयं भने सचेत छैनन्, उनलाई आफू र आफ्नो घेराले जे गरिरहेको छ, ठीक र महान् गरिरहेको छ भन्ने भ्रम छ । भ्रम मीठो भए पनि त्यो स्वयंकै हितमा भने हुँदैन ।
होलीवाइन काण्डदेखि केककाण्डसम्म आइपुग्दा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारले निकै आलोचना खेपेको छ । र, उनको ढोंगी राष्ट्रवादिता छर्लङ्ग भएको छ । तर आलोचनालाई विरोधका रुपमा लिने सल्लाहकारहरुको घेरामा बसेर ओलीले सच्चिने र आत्मआलोचना गर्ने मौका समेत पाउने छैनन् । आलोचक र विरोधीलाई छौँडा भनी तीर हान्ने विष्णु रिमालहरुको दम सरकारका क्रियाकलाप र गतिविधिले देखाइरहेको छ । भलै सरकारले बाँडेका रेल, पानीजहाज, ग्यास पाइपलाइन, वायुबिजुली, बिजुलीबस… यावत समृद्ध नेपालका सपनाहरु मुसाले काटिरहेका होउन्, जनता दैनिक दुर्घटनामा र ओखती उपचार नपाएर मरिरहेका होउन्, प्रधानमन्त्री ओली बाँसुरी बजाएर, केक काटेर हाेस् या भाेज लाएर मग्न देखिन्छन् ।
चरम राष्ट्रवादी देखिने धुनमा ओली आफ्नै शिरपोस ढलेको र धोती फुस्किएको थाहा नपाउने अवस्थामा कसरी पुगे ? उनलाई कसले चलाइरहेको छ, के आफ्नै विवेकले यतिसम्म विवादास्पद काम र गतिविधि गरिरहेका हुन् ? यति सार्हो लहडी पनि हुनुहुन्न, ताकि बुद्धिको बिर्को हराएको पत्तो नपाइयोस् ।
सत्ताको मात लागेपछि ‘नराजा’हरु ‘राजा’ हुँदै जान्छन् र नयाँ राजाहरू पुराना हुँदै जान्छन् । ओलीको पनि ज्ञानेन्द्रकै हालत हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जगजाहेर नै छ- गलत सल्लाहकारको घेरामा बस्दा ज्ञानेन्द्रको के हालत भएको थियो ! के अब ओलीले आफ्ना तिनै झुण्डको घेराबाट फुत्केर यी तमाम हर्कतबारे ग्लानि र पछुतो गर्ने फुर्सद पाउलान् ?
केक काण्ड : कसले के भने ?
– ‘प्रम ओलीले केकले बनाएको नेपालको नक्सा काट्दै आज जन्मदिन मनाएका छन् । प्रमलाई यस्तो कुबुद्धि र मुलुक काट्ने मति कसले दियो ? यो घोर अक्षम्य आपत्तिजनक घटना हो। तालि पिट्ने चैं सुभाष नेम्बांग। होलिवाईनमा झूम हुनेहरूको राष्ट्रघाती चर्तिकला।’ – भीम उपाध्याय (पूर्वसचिव)
– ‘प्रम ज्यु, बर्थडे-केक’ को तस्बिर विद्रुप लाग्यो। प्रमको मर्यादा र यहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई यो दृश्यले न्याय गरेन। प्रतिकात्मक अर्थ के बुझेर यस्तो केक बन्यो थाहा भएन। १९९८ मा रुसमा चैँ कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य मनाउन लेनिनको आकृतिको केक काटिएको थियो।’ – डा सूर्यराज आचार्य (नेता- विवेकशील साझा पार्टी)
– ‘नेपालको नक्सालाई जन्मदिनको ‘केक’ बनाउने हात कामेनन्। देशको नक्सालाई केक बनाएर काट्ने हात पनि कामेनन्। न त कामे नेताका हातहरु न कार्यकर्ताका। यस्तो देखेर लाज मान्ने र मुटु कमाउने त हामी निरीह नागरिक मात्र हौं।’ – मुमाराम खनाल (राजनीतिक विश्लेशक)
– ‘’बर्थडे केक’मा नेपालको नक्सा रहेछ। नक्सा काटेर लिम्पियाधुराको अनुमोदन हो कि अरु कुनै अलंकारको खोजी? कहिलेकाँही सौन्दर्य, सन्देश र संवेगको वेसुर बाँसुरीमा मात्र हैन अरु उपक्रमहरुमा बज्दोरहेछ।’ – नारायण अमृत (पत्रकार/विश्लेषक)
– ‘नियतवश नहोला तर लक्षण गतिलो छैन । छातीमा देशको जिम्मेवारीको बिल्ला र हातले देशको नक्सा काटेको देख्दा अचम्म लाग्यो । देशको प्रधानमन्त्रिको अनुहारमा पनि सन्देश हुन्छ, तर यो केक काटाइको सन्देश बुझिएन ।’ -रेखा थापा (कलाकार)
– ‘नियतै खराब चाहिँ पक्कै होइन, तर अति राष्ट्रवादी देखिने चक्करमा ठक्कर भने ठूलै लाग्यो ।
यो दुई वर्ष खासमा देखाउने र ताछेर या काटेर खाने चक्करमैं बितेकाले पनि यति चर्को आलोचना भएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूले आफ्ना क्रियाकलापले दिने सन्देशबारे सोच्नै पर्छ । ठ्याक्क देशको नक्सामा प्रधानमन्त्रीले छुरी चलाउँदा अरूले ताली बजाउने दृश्य पक्कै असहज हुन्छ भन्ने कल्पना र सल्लाह सामान्य मान्छेले पनि दिन सक्दो हो । तर, ओलीजीलाई एकपल्ट लागेपछि लाग्यो लाग्यो । यसमा सल्लाहकारलाई दोष दिनु पनि अर्थहीन छ । केक काट्ने त आखिर आफैले हो । एउटा धमिलो फोटो देख्दा त सिङ्गो देशलाई असजिलो लागेको कुरो आँखै अगाडि हुँदा उहाँलाई सहज नै लागेपछि सल्लाहकारको के दोष ?
केकभन्दा पनि आफैले बनाएको आचारसंहिता र कानुनको धज्जी उड्ने गरी आयोजना भएको यो राजसी कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन खल्लो बनेजस्तो लाग्यो । अलिकति नमिठो त सार्वजनिक बिदाले बनाएकै थियो ।
आँगनमा सुकुल या गुन्द्री बिछ्याएर त्यहाँको वास्तविक जीवन र संस्कार जस्तो छ त्यस्तै रङ्ग र शैलीमा मनाएको भए यो जन्मदिन उदाहरणीय बन्ने थियो । पिउने पानी बोक्न आधा घण्टा पैदल हिँड्नु पर्ने ठाउँमा हेलिकप्टरबाट केक बोकेर पुगेपछि भोलि सामन्तवाद विरुद्ध लड्ने भाषण गर्दा सामन्तवादको उदाहरण के भनेर दिने ?’ – नारायण गाउँले (टिप्पणीकार)
– ‘जन्मदिनको केकजस्तो होइन मेरो देश…,
मनोज गजुरेलको यो पुरानो गीत सान्दर्भिक भएको छ यतिबेला ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू, गल्ती स्विकार्नु उचित हुन्छ । देशको नक्साको अपमान मुलुकी संहिताको दफा १५१ को मर्म बमोजिम त दण्डनीयसमेत छ । – विश्वप्रकाश शर्मा (प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस)
– ‘खसी काटेर बिलो बाँडेर खाएजस्तो नेपाल आमाको बिलो बाँडेर खाने र भाग लगाउने के पी शर्मा ओली ज्युले आफ्नो जन्मदिनमा नेपाल देशलाई केक बनाएर काटेर खाए खुवाएको तस्वीर हो रे यो । साँच्चै हो भने भर्सेला परोस् !’ – स्वागत नेपाल (अभियन्ता, अधिवक्ता)
– ‘उहाँलाई संघीयता नरुच्दा मुलुक कसैको बर्थडे केक होइन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले आफैँ थाल्नुभएछ ।’ – रवि मिश्र (कार्टूनिष्ट)
– ‘तपाईका पक्कै सन्तान होलान। जन्मदिनको केक काट्ने रहर गर्लान केकमा बाको फोटो राख्ने जिद्दी गर्लान।त्यसबेला के गर्नु हुन्छ?
मन रुनेछ ! देसको नक्सा काटेर खादा त्यो केक बनाउन लगाउनेको मन नरोला तर काट्ने त मुटु भाको हुनुहुन्छ किन काटेको?जनता जान्न चाहान्छ्न्, प्रधानमन्त्रीज्यू !’ – अर्जुन आचार्य